Kushaywa edonsayo eMnyangweni Wezemfundo Ephakeme - Bayede News
Kushaywa edonsayo eMnyangweni Wezemfundo Ephakeme
Kuyacaca ukuthi aboHlanga kwakumele bonge imali eyanele ngaphambi kokufika konyaka wezi-2023. Isiphakamiso somnyango womfundaze kaHulumeni iNSFAS sikucacisa ngokusobala ukuthi kushaywa edonsayo kwelaseNingizimu Afrika. Ngiduduzekile kodwa uma ngibona ukuthi kuseyisiphakamiso esingakashicilelwa. Kungabe kungene amanzi endlini kwaboHlanga uma lesi siphakamiso sokuthi kuyomele abafundi baphumelele ezifundweni ezintathu kwezine abazenzayo singashicilelwa. Njengomeluleki wentsha ngezemfundo nezemisebenzi ngikubona kubalulekile ukuthi uma uMnyango noma uHulumeni efisa ukwenza uguquko oluthize kwezemfundo kanye nezokwelekelela ngemifundaze kumele ayicabangisise ngoba ayilula le ndaba, ayifani nokuphuza amanzi.
Ngifisa ungizwe kahle, angimelene nempumelelo kwezemfundo. Ngiphendule omunye kwenye yizinkundla zokuxhumana, ngathi kubalulekile ukuthi siyikhuthaze indaba yokuphumelela kwezemfundo kubafundi. Ngiqhubeke ngathi eminyakeni eyishumi ngisenyuvesi ngikubone konke futhi kuningi abafundi abahlangabezana nakho nengike ngahlakabezana nakho nami njengomfundi. Njengomuntu ofundisa kwesinye zezikhungo zemfundo ephakeme KwaZulu-Natal, ngisabubona ubunzima abadlula kubo abafundi. Kodwa kusemqoka ukuthi umuntu akuveze ukuthi kunabafundi abadlala ngamathuba. Ngithe uma ngiluchaza lolu hlobo lwabafundi, ngathi besebenza kanzima ukuze bangaphumeleli kunokuthi basebenze kanzima ukuthi baphumelele.
Noma sibonakala ungathi sifuna ukukhuthaza ukuphumelela kwabafundi lesi siphakamiso, asinabo ubulungiswa. Ukuphumelela kwabafundi kuncike ezintweni eziningi. Kimi lesi siphakamiso sinako ukungaboni izinkinga abanazo abafundi futhi siphakamiswe abantu abanganakho ukuzwelana nabafundi. Lesi siphakamiso sifana nokuthi umqashi athi kumsebenzi ogulayo akeze emsebenzini egula enjalo, ephinde amnike umsebenzi onzima bese ugada imiphumela emihle. Kuyosiza ukuthi uMnyango Wezemfundo Ephakeme kanye nesikhungo iNSFAS siqhamuke nenqubomgomo ekuveza ngokusobala ukuthi obani okubhekeke ukuthi bathole le miphumela.
Ukunikwa kwaboHlanga imali yokufunda kungakahlangatshezwani nezidingo zabo zonke kufana nokunika umuntu ohlala odakeni amabhuzu amasha uthi akawagcine ehlobile. Uma uHulumeni efuna ukubona imiphumela emihle futhi efuna ukonga imali, kuzomele aqale abhekane ngqo nezidingo zabantu. Umfundi oyofunda enezinkinga ngeke aphumelele. Ukuthi aboHlanga bathwele kanzima ubabona ngokuthi bathathe yona le mali engekho, abayinikwa yilesi sikhungo, bondle ngayo emakubo. Sike sabona ezinkundleni zokuxhumana kanye nasezindabeni kunconywa abafundi abonge imali yokufunda baze bakhela abazali babo izindlu noma baqala ibhizinisi. Lokhu kuveza ngokusobala ukuthi aboHlanga banezinkinga eziningi ezenza bengaphumeleli. Isiphakamiso sizofaka ingcindezi enkulu ngaphezulu kwalena ababhekene nayo. Kungakho ngithi kushaywa edonsayo.
Ukucindezela abafundi kuyashaqisa ngoba kuvela esikhungweni esingekho msulwa. Kunabafundi abangakakhokhelwa izimali kuze kube yimanje. Abanye bakhokhelwa unyaka owodwa balaxazwa kanjalo bengakaphothuli iziqu zabo. Sithi isintu, indlu yegagu iyanetha. Ezinsukwini bengikhuluma nomunye udadewethu obethamele enye yezinkulumo zami emcimbini obuhlelwe uMasipala Ethekwini. Uzichaze njengomuntu okweleta imali eningi esikhungweni lapho abefunda khona, okwenza angabi nesitifiketi sakhe esikhomba ukuthi usephothulile iziqu zakhe. Enkulumeni yethu ukuvezile ukuthi uNSFAS wakhokhela eminye iminyaka yokufunda kwakhe wase uyamlaxaza singekho isidingo futhi engatholanga isexwayiso. Inkinga ebhekene nalo mfundi ingezinye zezinkinga ababhekene nazo abafundi abaningi bakuleli.
Ngifikelwa ukufudumala uma ngibona iziphakamiso zikaHulumeni ziphakanyiswa aboHlanga ukushaya aboHlanga. Imali ekhishwa yiNSFAS ilekelela aboHlanga abaningi. Uma uyivala uvalela owoHlanga ngaphandle. Kungakho ngidabuka ngokufanayo uma ngibona umuntu onikwe ithuba edlale ngalo. Uma ngithi kushaywa edonsayo ngisho ukuthi owoHlanga ucindezela omunye woHlanga ngokumncisha ithuba lemfundo. Iseyinde indlela okumele ayihambe uHulumeni wakithi ngaphambi kukuthi aphakamise isiphakamiso esifana nalesi. Kuningi okumele kulungiswe, okufaka phakathi zona izikhungo abafundela kuzo abafundi. Izikhungo eziningi yizo ngqo ezenza abafundi bengaphumeleli. Izikhungo eziningi azikho ezingeni lokufundisela kodwa kubhekeke ukuthi abafundi bephumelele ngamalengiso.
Uguquko luhle futhi siyalufuna, kodwa ushintsho oluza nengcindezelo akulona uguquko yincidezelo ebhekiswe kowoHlanga. Umbuzo omkhulu futhi osemqoka ukuthi kuyoze kube nini owoHlanga ehlupheka futhi ekwenkulu incindezi yangabomu. Ngivumelana nezinhlangano zabafundi ezisicichile lesi siphakamiso ngoba sinakho ukungazwelani nabafundi abasakhala ngemfundo yamahhala ababethenjiswe yona.
nguSanele Gamede Nov 19, 2021